-अहिलेसम्म लामखुट्टे, झिंगा आदिबाट कोरोना भाइरस सरेको देखिएको छैन । कोरोना भाइरस स्वाश्प्रश्वासजन्य भाइरस भएकोले लामखुट्टे र झिंगाको टोकाइबाट सर्दैन ।
– कोरोना संक्रमण भएको दिनदेखि नै अरुलाई रोग सर्न सक्छ । त्यस्तै निको भएपछि पनि २ हप्ता होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दछ ।
-एकजना व्यक्तिले औसत ३ जनालाई संक्रमण सार्न सक्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगको आधारमा यो औसत निकालिएको हो । १–२ जनालाई संक्रमण भएका परिवारमा परिवारका सबै सदस्यलाई संक्रमण सर्दैन । एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैलाई सर्दैन कोरोना संक्रमण सर्नको लागि धेरै संयोग र जोखिम मिल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता हरेक व्यक्तिको अलग अलग हुन्छ ।
-कोरोना भाइरस अत्यन्तै घातक भाइरस हैन । सार्स, मर्स, इबोला, प्लेग, बिफर लगायतका रोगभन्दा यो निकै कम घातक छ ।
-संक्रमण फैलिएको यो अवस्थामा सेवन गरिरहेका औषधि तथा नबिग्रिने खाद्य पदार्थ २–३ महिनाको स्टोर गर्ने, तरकारी फलफूल हप्ताको एकपटक किन्ने, दूध २ दिनमा एकपटक किन्ने गर्दा थप सुरक्षित हुन सकिन्छ ।
-कोरोना भाइरस मार्नको लागि सोडा, एसिड, अल्कोहल, स्टेरोइड औषधि, इथानोल, तेल आदिले कुल्ला गर्ने वा निल्ने गरेमा खतरा हुन्छ । तसर्थ सरसफाई, सामाजिक दूरी र बाहिर एकदम कम समय जाने जस्ता सुरक्षित अभ्यासले कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्-सर्जरी तथा प्रशव गराउनुपुर्व अनिवार्य पिसीआर टेष्ट गरौं
‘मुटु र फोक्सोका बिरामीलाई भन्दा पनि भिटामिन ‘डी’को कमी भएकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको खतरा बढी
११ साउन, काठमाडौ । मनोभ्रंश, मुटु रोग र फोक्सोको समस्या…
होम क्वारेन्टाईनमा बस्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनायो मापदण्ड, जान्नुहोस् के–के छ मापदण्डमा ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलले विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरुको लागि…
गालामा आउने पिम्पलबाट बच्न के खाने, के नखाने ?
चीनमा भेटिएको ब्यूबनिक प्लेग रोग कति खतरनाक ? के यसकाे उपचार सम्भव छ?
मास्क कसरी लगाउने ? जान्नुहोस् मास्क लगाउने सहि तरिका
डा.रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्–यसकारण उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ